Nyein Aung Htet, Author at Anycall Mobile
iPhones တွေမှာ နားကြပ်ပေါက်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခု (သို့) မျိုးဆက်သစ် Airpod Pro …
iPhones တွေမှာ နားကြပ်ပေါက်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Airpod ရဲ့ နောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ်တစ်ခု ထွက်လာဖို့ ‌တော်တော်လေး နီးကပ်နေပါပြီ။ အခုထွက်ရှိနေတဲ့ 3D Render (သုံးဖက်မြင် ပုံရိပ်) တွေဟာ iOS 13…
ပွဲကြမ်းဦးမှာ သေချာတဲ့ Redmi K30 & K30Pro…🔥🔥🔥
December 3, 20192Mins Read
Redmi K20 နဲ့ K20 Pro တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဦးမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ Redmi K30 နဲ့ K30 Pro ကို မကြာခင် မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျဆိုရင်တော့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ…
လူတွေ ပြောပြောနေကြတဲ့ VoLTE အကြောင်း သိသင့်သမျှ…📶🔥
VoLTE, VoLTE ဆိုပြီး လူတွေပြောနေကြတာကို ကြားဖူးကြမှာပါ ဒါမှဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Operator တွေဖြစ်တဲ့ Telenor တို့ Mytel တို့ရဲ့ Messages တွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို မြင်ကြတွေ့ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ…။…
အမေ့အလျော့ခံဖုန်းလေးတွေ (သို့မဟုတ်) လူအများစုတက်နိုင်တဲ့ Budget ဖုန်းလေးများ…🔥
တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် မရိုးနိုင်အောင် ထွက်လာနေတဲ့ နည်းပညာမြင့်၊ ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ဖုန်းတွေ အကြောင်းကို Hype ကြရင်း၊ ငေးမော အားကျရင်း၊ လူအများစုတတ်နိုင်တဲ့ Budget ဖုန်းလေးတွေကိုမေ့လျော့နေကြပါတယ်။ iPhone 11 Pro ရဲ့ Camera က…
Global ဝယ်ရမလား? China ဝယ်ရမလား?
November 10, 20192Mins Read
Xiaomi နဲ့ Redmi နဲ့ ဖုန်းတွေမှာ China အလုံး နဲ့ Global အလုံး ဆိုပြီး နှစ်ခု ကွဲပြားနေတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ လူတော်တော်များများ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျွန်တော်တို့…
လူတွေ ပြောပြောနေကြတဲ့ Ultra-wide angles,Telephoto, … ကင်မရာ တွေဆိုတာ… 🔥📷
ဒီနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ပုံမှန် ကင်မရာ ၁လုံးကနေ Ultra-wide angles, Telephoto, Depths နဲ့ Macro ဆိုပြီး ကင်မရာ ၂လုံး၊ ၃လုံး၊ ၄လုံးကနေ နောက်ဆုံး ၅လုံး အထိ…
Dxomark မှာ အမှတ် အမြင့်ဆုံးထဲက ဈေးအချိုဆုံး 108MP ကင်မရာ ၅လုံးနဲ့ဖုန်း (သို့) Mi CC9 Pro …
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာ အကြီးအကျယ် Tease လုပ်ပြခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi CC9 Pro ကို ဒီကနေ့ တရားဝင် မိတ်ဆက်သွားပါပြီ။ တရားဝင် မိတ်ဆက်သွားတဲ့ Mi CC9 Pro အကြောင်လေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့…
Xiaomi နဲ့ Redmi နဲ့ ဖုန်းတွေမှာ China အလုံး နဲ့ Global အလုံး ဆိုပြီး နှစ်ခု ကွဲပြားနေတာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို အခုထိ သေသေချာချာ မသိတဲ့…
Mi CC9 Pro ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချို့ (အပိုင်း၂) … 🔥🔥🔥
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၅ရက်မှာ တရားဝင် မိတ်ဆက်မယ့် Mi CC9 Pro ရဲ့ အကြောင်းတွေကို Xiaomi က Tease လုပ် ချပြနေတာ တော်တော်လေးများနေပါပြီ။ Mi CC9 Pro ရဲ့…
In Mandalay Addresses
စက်မှု Anycall Mobile ဆိုင်ခွဲ
စက်မှု Anycall Mobile ဆိုင်ခွဲ (62) လမ်းမကြီး၊ စံပြလမ်းနှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှု (၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ 09778778080
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၅ရက် နေ့မှာ တရားဝင် မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်တဲ့ Mi CC9 Pro ရဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို သိရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အခုလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်လေး‌ေတွ ထွက်ရှိလာလို့ ထပ်မံမျှဝေပေးပါရစေ……
လူတွေ သိပ်မသိကြသေးတဲ့ UFS ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?
အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သူတို့ရဲ့ Storage ကို ဖော်ပြရင် ပမာဏဖြစ်တဲ့ 128GB တို့ 256GB တို့ ဘာတို့ အပြင် UFS 2.1 တို့ UFS 3.0 တို့ ဆိုပြီး…
ထုတ်နိုင် လွန်းလှသူ Xiaomi ကတော့ MI MIX Alpha လို အကြမ်းကြီးတွေထုတ်ပြရတာနဲ့တင် အားရသေးပုံ မရပါဘူး။ အခုလည်း Mi CC9 Pro ထပ်ပြီးတော့ မိတ်ဆက်ပါဦးမယ်တဲ့ ခင်ဗျာ…။ Curious (စူးစမ်းသိရှိချင်သော)…
မျက်နှာပြင် အပြည့်၊ ဘေးဘောင်မပါတဲ့ ဖုန်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီလား? ဒါမှမဟုတ် အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
ဒီနှစ်တွေမှာ ခေတ်ရှေ့ ပြေးလွန်းတဲ့ ဘေးဘောင်အရမ်းသေးငယ်ပြီး မျက်နှာပြင် အပြည့်ဖြစ်လုနီးပါး ဖုန်းအများအပြားကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ တွေထံမှ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရ၊ မြင်တွေ့နေရဆဲပါ။ အဲ့ဒီဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့ သူမတူ ခြားနားတဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အသီးသီးကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့…
108MP နဲ့ 120Hz Display အထိ Support ပေးနိုင်တဲ့ Samsung ရဲ့ Exynos 990 Chipset အသစ်…
Samsung အဖို့ ဒီနှစ်အတွက် သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းအမြင့်စားတွေကို မိတ်ဆက်ပြီးပြီ ဖြစ်လို့ နောက်နှစ်ထုတ် Flagship ဖုန်းအမြင့်စားတွေမှာ ထည့်သွင်းထားမယ့် Chipset တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ အခု Exynos 990 ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်…